ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲလား၊ ထုံးတမ်းဓလေ့ကြောင့်ပဲလား ကျွန်တော်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက နှိုင်းယှဉ်ခံရတာ ရိုးအီနေပါပြီ။ မူလတန်း စ,တက်ကတည်းက သူငယ်ချင်းရဲ့ မိဘတွေနဲ့ အပြိုင် ကျွန်တော့် မိဘတွေက ကျွန်တော့်ကို သူတို့အလိုကျ စီမံရတာ အမော။ သူငယ်ချင်းက စက်ဘီးလေးနဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်လည်း မရမှာ မပူရဘူး။ သူက ကျောင်းဆရာမ ကျူရှင်တက်ရင် ကျွန်တော်လည်း မတက်မနေရပါ။ ကျွန်တော့်လိုအပ်ချက်အတွက် စီစဉ်ပေးခဲ့တာလား၊ လူကြီးအချင်းချင်း ပြိုင်ဆိုင်ချင်လို့ပဲလား။ အသက်ကြီးလာလေလေ ပိုဆိုးလာလေလေပါပဲ။ ဆယ်တန်းမှာဆိုရင် မိဘအချင်းချင်းက အပြိုင်အဆိုင်၊ ဟိုက ဒီကျူရှင်ထားရင် ကိုယ့်ကိုလည်း အဲဒီ ကျူရှင်ထားပေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့။ တက္ကသိုလ် တက်ပြန်ရင်လည်း အသိမိတ်ဆွေတွေရဲ့ သားသမီးတွေ လျှောက်တဲ့ တက္ကသိုလ်ကိုသာ ခေါင်းထဲ ထည့်စဉ်းစားခဲ့တယ်။ ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် ဘာတက်ချင်တယ်၊ ဘာလုပ်ချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်ချင်တယ် သူတို့မသိဘူး။ သူတို့ သိတာက အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ နှိုင်းယှဉ်နေရရင် ပြီးရောပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘဝမြေစာပင်ပေါ့။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကနေ လွတ်မြောက်ပြီလားဆိုရင် အခုထိ မလွတ်သေးဘူးလို့ပဲ ပြောပါရစေ။ ကျောင်းပြီးတော့ ကိုးရီးယားစာကို သင်ပြီး ကိုးရီးယားကို ပညာတော်သင်သွားခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေ ပြောတဲ့ စကားကတော့ ရှင်းရှင်းလေး။ “ငါတို့အသိထဲမှာ အားလုံးက အမေရိကန်တို့၊ ဂျပန်တို့၊ စင်္ကာပူတို့ကို သွားနေတာ မင်းက ဘာဖြစ်လို့ ဂလန်ဂဆန်လုပ်နေတာလဲ” တဲ့။ ရိုင်းမိချင် ရိုင်းနေလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် စကားတစ်ခွန်း ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနာဂတ်ဘဝက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လျှောက်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်လမ်းကို ကျွန်တော် ရွေးပိုင်ခွင့် အပြည့်အစုံ ရှိတယ်လို့၊ သူများက ဒါဆိုရင် ကိုယ်လည်း ဒါလိုက်လုပ်စရာမလိုပါဘူးလို့။
လူတိုင်းက ဘဝပေး အခြေအနေတွေ မတူကြပါဘူး။ ဘာသာရေးစကားလုံးကို ယူသုံးရရင် တစ်ယောက်ချင်းဆီမှာ ပါလာတဲ့ အကြောင်းတရားတွေ မတူပါဘူး။ အကျိုးတရားလည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ပန်းတိုင် တစ်ခုတည်းကို လူနှစ်ယောက်က စ,မှတ် အတူတူကနေ ထွက်ခွာတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ယောက်က စည်းစိမ်ဥစ္စာအပြည့်အစုံနဲ့၊ အထောက်အပံ့များစွာနဲ့ စ,ထွက်ပြီး တစ်ယောက်ကတော့ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ မိဘကို လုပ်ကျွေးရင်း ဘဝကို ပင်ပန်းစွာ ရုန်းကန်ပြီး ပန်းတိုင်ကို သွားမယ်။ ဒါဆိုရင် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းက တရားမျှတပါ့မလား။ သစ်သီးချင်းအတူတူတောင် ပန်းသီးတစ်လုံးနဲ့ လိမ္မော်သီးတစ်လုံးကို ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ ဘယ်လို နှိုင်းယှဉ်ကြမလဲ။ တူညီတာချင်း မဟုတ်သရွေ့တော့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းက ကိုယ့်ကို အကျည်းတန်မှုတွေပဲ ယူဆောင်ပေးလာမှာပါ။ အနှိုင်းခံကို ကြည့်ပြီး သူတို့လို လိုက်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို စိတ်ကူးဟာ ကိုယ့်တက်လမ်းရဲ့ အတားအဆီးဖြစ်လာမှာပါ။
အဲဒီတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ ဘဝနဲ့ လိုက်နှိုင်းစရာမလိုဘူး။ စိတ်ပျက်အားငယ်နေစရာလည်း မလိုဘူး။ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက် အနှစ်သာရ ပိုရှိတာက ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းပါပဲ။ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နေရာမှာလည်း သူတစ်ပါးကို ယှဉ်စရာ မလိုပါဘူး။ မနက်ဖြန်ရဲ့ ကိုယ်ဟာ ဒီနေ့ရဲ့ ကိုယ့်ထက် ပိုသာနေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို မွေးဖို့ပါ။ ကိုယ်အားကျလေးစားတဲ့ လူတွေ ရှိရင်တောင်မှ သူတို့ဆီက သင်စရာတွေ၊ အတုယူစရာတွေပဲ ယူလို့ရမှာပါ။ သူတို့လို ဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီး နှိုင်းယှဉ်လို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရှေ့လျှောက်လည်း ကျွန်တော်တို့ပါပဲလို့ ပြောရင်း…..
Life Balance ဆောင်းပါးများ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ပတ်ဝန်းကျင် လှည့်ကွက်
Mie December 15, 2021 at 8:34 PM
San Zuren December 16, 2021 at 12:24 AM
သာမှကူးမယ်ဆိုတဲ့ သာကူးတွေကို ပြောချင်တာက ...
နောင်မျိုးဆက်တွေ သမိုင်းကြောင်း ပြောကြတဲ့အခါမှာ သိသိသာသာ ကွာခြားလိမ့်မယ်...ဒါဟာ ငြင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားဘဲ...
akkh December 17, 2021 at 1:08 AM
Dar Dar December 17, 2021 at 5:40 AM
Dar Dar December 17, 2021 at 8:56 AM
Harry December 18, 2021 at 7:37 PM
အဲဒီသာကူးဆိုတဲ့ ခြံစည်းရိုး ခွထိုင်နေတဲ့ လူတွေက များနေတော့ ပြောရဆိူရတာ သိပ်မကောင်းဘူး
Lat December 19, 2021 at 1:42 AM
Cherry Noel December 20, 2021 at 7:55 AM
Dar Dar January 5, 2022 at 5:56 AM
Sammi December 15, 2021 at 8:42 PM
သူများနဲ့ နှိုင်းစရာ မလိုပါဘူး
ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ ဒီ​နေ့နဲ့ မနက်ဖြန် ဘာ​တွေ တိုးတက်လာလဲ ဆိုပီးပဲ ပြိုင်ရမှာပါ
Myint Win December 18, 2021 at 1:25 AM
Unknown January 6, 2022 at 10:33 PM
U Nyi December 15, 2021 at 9:51 PM
KMT December 15, 2021 at 10:15 PM
Su Su San December 15, 2021 at 11:00 PM
Jasmine December 15, 2021 at 11:39 PM
Blackrose December 15, 2021 at 11:46 PM
Lillian mon December 16, 2021 at 12:25 AM
M December 16, 2021 at 1:44 AM
Su December 16, 2021 at 2:09 AM
Zin Mar Htwe December 16, 2021 at 2:13 AM
Lat December 16, 2021 at 2:56 AM
Interesting paragraph. I like it.
And also useful to me
Aung December 16, 2021 at 3:42 AM
Wai Zin Mar December 16, 2021 at 6:42 AM
Man Lun December 16, 2021 at 7:06 AM
Aye Zaw Thu December 16, 2021 at 7:16 AM
Dar Dar December 16, 2021 at 7:27 AM
TKT December 16, 2021 at 8:17 AM
Lat December 19, 2021 at 1:43 AM
Mon mon December 16, 2021 at 8:18 AM
Eliz4win December 16, 2021 at 8:30 AM
ChicChit December 16, 2021 at 8:35 AM
Saw San Myint December 16, 2021 at 5:43 PM
NSL December 16, 2021 at 7:00 PM
Marry lynn December 16, 2021 at 8:55 PM
အခုတလော နိုင်တော့မဲ့ senseတွေ ရနေတယ်ညော်
Sapalphyu December 16, 2021 at 9:21 PM
Su Su December 16, 2021 at 9:58 PM
Ei December 16, 2021 at 11:46 PM
yoke soe December 17, 2021 at 12:18 AM
akkh December 17, 2021 at 1:09 AM
aungwinthet December 17, 2021 at 1:37 AM
Neon December 17, 2021 at 2:03 AM
Elrics December 17, 2021 at 2:16 AM
Candle December 17, 2021 at 3:59 AM
Khin Thet Mon December 17, 2021 at 4:04 AM
Dar Dar December 17, 2021 at 5:41 AM
ဒီနေ့ရဲ့ကိုယ်ဟာ မနက်ဖြန်မှာပိုကောင်းတဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ရမယ်💜💜
AKM December 17, 2021 at 1:47 PM
AKM December 17, 2021 at 2:24 PM
AKM December 17, 2021 at 2:39 PM
Myat December 17, 2021 at 3:36 PM
Deborah December 17, 2021 at 5:18 PM
AKM December 17, 2021 at 7:02 PM
AKM December 17, 2021 at 7:04 PM
RT December 17, 2021 at 7:16 PM
Nyo lay December 17, 2021 at 8:16 PM
Myint Win December 17, 2021 at 9:10 PM
Aye Zaw Thu December 17, 2021 at 9:20 PM
Thandar December 17, 2021 at 10:13 PM
Stopped comparing your self to other
Zin Mar Htwe December 17, 2021 at 10:28 PM
Hazel Nicole December 17, 2021 at 10:45 PM
Aye Shwe December 17, 2021 at 11:02 PM
myochitmyanmar December 18, 2021 at 12:36 AM
Win Htut December 18, 2021 at 12:37 AM
Wai Zin Mar December 18, 2021 at 2:12 AM
Unknown December 18, 2021 at 2:16 AM
Should learn what you need to improve while comparing with others, positive thinking is important, nice article!
AKM December 18, 2021 at 2:52 AM
Yi Yi Tin December 18, 2021 at 3:15 AM
AKM December 18, 2021 at 3:41 AM
AAA December 18, 2021 at 3:52 AM
Ko Khant December 18, 2021 at 4:38 AM
Dar Dar December 18, 2021 at 5:53 AM
Dar Dar December 18, 2021 at 6:46 AM
Thuta December 18, 2021 at 6:48 AM
Nice essay 👍🏼
KhantGyi December 18, 2021 at 7:07 AM
TT December 18, 2021 at 8:29 AM
Unknown December 18, 2021 at 4:17 PM
Bunny December 18, 2021 at 5:52 PM
chaw December 18, 2021 at 7:12 PM
phoophoo December 18, 2021 at 7:32 PM
Nilar December 18, 2021 at 8:48 PM
Okkar December 18, 2021 at 8:58 PM
KhantGyi December 18, 2021 at 9:34 PM
Chan December 18, 2021 at 9:38 PM
Thuta December 18, 2021 at 10:43 PM
အရေးတော်ပုံ December 18, 2021 at 11:33 PM
Ingyin December 19, 2021 at 12:24 AM
Mon mon December 19, 2021 at 12:35 AM
Lynn Thu Aung December 19, 2021 at 2:04 AM
khoon aoune December 19, 2021 at 2:50 AM
Dar Dar December 19, 2021 at 3:27 AM
TKT December 19, 2021 at 3:55 AM
AKM December 19, 2021 at 4:08 AM
Man Lun December 19, 2021 at 4:13 AM
Williom December 19, 2021 at 5:44 AM
M December 19, 2021 at 6:09 AM
Dar Dar December 19, 2021 at 6:17 AM
N Y p December 19, 2021 at 6:26 AM
Khaing Swe Mar December 19, 2021 at 7:02 AM
ဆု December 19, 2021 at 8:01 AM
AKM December 19, 2021 at 9:07 AM
Sunshine 💦 December 19, 2021 at 9:14 AM
T Lay April December 19, 2021 at 3:44 PM
နောက်ဆုံး အပိုဒ်လေး အကြိုက်ဆုံးပဲ၊
ကိုယ့်ခံယူချက် နဲ့ တထပ်တည်း ကျတယ်။
ကျေးဇူးအထူးပါ ဆရာ ဝင်းနိုင်စိုး ရေ။
Ko Koe Myat December 19, 2021 at 5:45 PM
Ni Ni Phoenix December 19, 2021 at 9:44 PM
Aye Kyaing December 19, 2021 at 9:58 PM
Aye Zaw Thu December 19, 2021 at 11:03 PM
Dar Dar December 19, 2021 at 11:18 PM
tkhantmaun December 20, 2021 at 1:09 AM
ok par thanks
Phyo pauk December 20, 2021 at 5:19 AM
minm99762@gmail.com December 20, 2021 at 5:23 AM
AKM December 20, 2021 at 8:10 AM
AKM December 20, 2021 at 8:11 AM
AKM December 20, 2021 at 8:16 AM
Thu Zar December 20, 2021 at 8:40 AM
AKM December 20, 2021 at 8:50 AM
Su Su December 20, 2021 at 6:48 PM
Thar Htwe December 20, 2021 at 7:36 PM
khoon aoune December 20, 2021 at 8:01 PM
Aye Zaw Thu December 20, 2021 at 10:42 PM
AKM December 21, 2021 at 3:59 AM
Ei December 21, 2021 at 6:23 AM
Let's try more than before
Che December 24, 2021 at 1:01 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 7:15 AM
"နှိုင်းယှဉ်ခြင်းထက် အနှစ်သာရ ပိုရှိတာက ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းပါပဲ။ ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ နေရာမှာလည်း သူတစ်ပါးကို ယှဉ်စရာ မလိုပါဘူး။ မနက်ဖြန်ရဲ့ ကိုယ်ဟာ ဒီနေ့ရဲ့ ကိုယ့်ထက် ပိုသာနေရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို မွေးဖို့ပါ။"
Kan January 6, 2022 at 8:29 PM
Nwe December 30, 2021 at 5:21 AM
Unknown January 3, 2022 at 1:54 AM
AK 47 January 3, 2022 at 9:05 AM
Win Min Paing January 3, 2022 at 10:41 PM
Unknown January 4, 2022 at 2:01 AM
Thanks ,for this post
Ancro January 4, 2022 at 9:33 AM
Moeoonwayoo January 4, 2022 at 7:45 PM
ကျေးဇူး ပါ ဆရာ
Hla Hla Nue January 4, 2022 at 8:23 PM
MML January 5, 2022 at 10:51 AM
nyi hmue thwin January 6, 2022 at 6:12 AM
Goodnight sweet drean
Unknown January 6, 2022 at 6:14 AM
ဒါမဲ့ အက်မင်ဂျီးရယ် ဒက်ဗ်ဂျီးကို C2D မှာပွိုင့်တွေပြန်ထည့်ပေးခိုင်းပါလား..မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ပွိုင့်တွေ ဂရက်ကြည့်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ရတာအဆင်ပြေမနေဘူး..
LEO KO SWE January 6, 2022 at 6:15 AM
Unknown January 6, 2022 at 6:26 AM
Unknown January 6, 2022 at 6:28 AM
Unknown January 6, 2022 at 6:31 AM
Saw San Myint January 6, 2022 at 6:46 AM
Unknown January 6, 2022 at 6:49 AM
Nway Oo KZ is my fb acc.😁
angelkhine January 6, 2022 at 6:58 AM
Hla Hla Nue January 6, 2022 at 6:59 AM
Unknown January 6, 2022 at 7:03 AM
kono dio da January 6, 2022 at 7:12 AM
Comment ​တေများ​တော့ ​အောက်ထိဆွဲရတာကြာပါတယ်ဗျ
World Wide January 6, 2022 at 7:21 AM
Unknown January 6, 2022 at 7:21 AM
Myo January 6, 2022 at 7:32 AM
Unknown January 6, 2022 at 8:02 AM
Unknown January 6, 2022 at 8:10 AM
9949254980 mb100လောက်ကူညီပါလား ဘေအခက်ခဲရှိနေလို့ပါ
Unknown January 6, 2022 at 8:17 AM
Mal Lay January 6, 2022 at 8:19 AM
Kyaw mae yaung January 6, 2022 at 8:36 AM
Unknown January 6, 2022 at 9:43 AM
Unknown January 6, 2022 at 10:01 AM
Mon gyi January 6, 2022 at 12:33 PM
Sitthu January 6, 2022 at 4:34 PM
​အိမ်က အ​ဖေနဲ့အ​မေကို ​တွေ့​စေချင်တယ်။ ငါ့သား မင်းဘာဖြစ်ချင်လဲလို့ တစ်ခါမှ မ​မေးဘူး။ အခု​တော့ ကိုယ့်သား​လေး အလှည့်​ရောက်ရင် ကိုယ့်လိုမဖြစ်​အောင် ကြိုးစား​ပေးရမယ်။
BoTun January 6, 2022 at 5:59 PM
zaylatt January 6, 2022 at 7:56 PM
Phue January 6, 2022 at 8:18 PM
Myate January 6, 2022 at 8:25 PM
Lwin Lwin January 6, 2022 at 8:30 PM
Unknown January 6, 2022 at 8:37 PM
Yamin January 6, 2022 at 9:05 PM
Unknown January 6, 2022 at 9:44 PM
PDF တွေ နိုင်ငံ့အနာဂတ်
UG တွေက ပြည်သူ့ သူရဲကောင်း
EAO တွေက .....(ပြောတာမှားသွားမှာစိုးလို့)
ပြည်သူတွေက အင်အား (ထောက်ပို့/ရိက္ခာ/ဘာညာသာရကာ)
zaw ko htet January 6, 2022 at 9:56 PM
nyi hmue thwin January 6, 2022 at 10:09 PM
Unknown January 6, 2022 at 10:36 PM
Jhon January 6, 2022 at 10:53 PM
Unknown January 6, 2022 at 11:51 PM
မင်းအောင်လှိုင် မအေလိုး မအေလိုးမင်းအောင်လှိုင်ပါ ကြူခေါစောက်ခေါမလင်
January January 7, 2022 at 12:01 AM
တကယ်ကို Motivate ဖြစ်စေပါတယ်
Thet Aung January 7, 2022 at 12:34 AM
minm99762@gmail.com January 7, 2022 at 12:41 AM
Unknown January 7, 2022 at 1:16 AM
အရေးတော်ပုံမုချ အောင်ကို အောင်ရမည်...✍️✍️✍️✍️✍️
naychi January 7, 2022 at 1:55 AM
Unknown January 7, 2022 at 1:57 AM
စစ်ဘေးရှောင်နဲ့ pdf ကလေးတွေအားလုံး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ တိုက်ပွဲတိုင်းအနိုင်ရပီး အထိခိုက်အကျဆုံးမရှိပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါတယ်
Hla Hla Nue January 7, 2022 at 2:02 AM
Hla Hla Nue January 7, 2022 at 2:26 AM
Unknown January 7, 2022 at 2:34 AM
Minn Khant January 7, 2022 at 2:38 AM
MML January 7, 2022 at 2:41 AM
May Htoo Sein January 7, 2022 at 3:00 AM
Light of that day